Okuhlangenwe nakho kokuvikela nokulawula kwe-COVID-19 | I-Shoufan Metal
Okuhlangenwe nakho kokuvikela nokulawula kwe-COVID-19
Manje iCorona-virus isakazeka emhlabeni wonke. Muva nje sithola izindaba eziningi ezivela kumakhasimende ngesimo samazwe abo. Siyazi ukuthi abanye benu bakhathazekile ngaleli gciwane.
Esikhathini esedlule, sizwe okufanayo njengoba uhlangabezana nakho manje. Sifuna ukuhlanganyela nakho okuthile mayelana nokuthi sikusebenzisa kanjani ukudlula esikhathini esinzima. Ngiyethemba ukuthi lokhu kuzokwenza usizo.
Kusuka emininingwaneni yezibalo, igciwane alibi kakhulu, njenge-flue eyenzeka kaningi. Kepha ukusabalala kwegciwane le-corona kunamandla. Ngesikhathi sobhadane, siyacelwa ukuthi sihlale emakhaya singaphumi. Ngoba uma abantu abaningi bethinteka ngasikhathi sinye, awukho umbhede owanele nodokotela esibhedlela. Abantu abaningi balahlekelwe yimpilo yabo Ngoba abakwazi ukwelashwa ngezikhathi eziphakemeyo.
Ngasikhathi sinye, lapho kutholakala abantu abathintekile, abantu ahlangane nabo futhi axhumana nabo phambilini bazotholakala futhi bacelwe ukuba bahlaliswe bodwa izinsuku eziyi-14, uma kungenasibonakaliso esihlobene negciwane, lokho kusho ukuthi baphephile.
Uma bethintekile futhi bengathí sina, bangasebenzisa umuthi wendabuko waseShayina noma umuthi esibhedlela, bahlale egumbini elihlukanisiwe ukuze balulame. Uma kungabucayi, abaningi bangalulama ngalesi sikhathi.
Gcina umoya omuhle, zivocavoca umzimba futhi uhlale ekhaya.
Uma kufanele siphumele ngaphandle, imaski iyadingeka kakhulu. Futhi uma ubuyela ekhaya, izingubo zidinga ukubulawa ngegciwane ngophuzo olungu-75%. Ngale ndlela, ithuba lokutheleleka lizoba liphansi kakhulu
Kuyithuba elihle lokujabulela isikhathi nomndeni wethu Njengoba imvamisa, umsebenzi uthatha isikhathi sethu esiningi. Ngasikhathi sinye, kunesikhathi esanele sokufunda nokufunda izinto onentshisekelo kuzo. Ukuthola izinto ezithile ongazenza kuzosenza sizizwe singcono kakhulu.
Siyabonga ngazo zonke izibusiso zamakhasimende ethu nabangane.
Ngesikhathi esinzima, sithola usizo oluningi oluvela emazweni akho.
siyazisa kakhulu ngobuqotho.
Manje sizonibusisa nonke futhi siqinisekile ukuthi ubhadane kuzodlula maduze. Futhi izwe lethu lizosiza futhi labelane ngalo lonke ulwazi. Ngicela ungakhathazeki, sihlangene njengomndeni omkhulu emhlabeni owodwa. Uma udinga usizo, sicela usazise.
Isithombe Esivela eChina Nsuku Zonke
Isikhathi Iposi: May-27-2020